Namaste Filmy, Author at Namaste Filmy – Page 705 of 706
पछिल्लो समय स्थानिय स्तरमा पनि विभिन्न फेशन शो तथा सुन्दरी प्रतियोगिताहरु आयोजना हुने क्रम बढेको छ । यसैवीच चितवनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुनौलो भविष्य निर्माण गर्नको लागी स्टाफ नर्स अध्ययन गरिरहेका सुन्दरीहरुका बिच मिस नर्स चितवन…
ओस्कार विजेता फिलीप हाफमैनको निधन
ओस्कार अवार्ड विजेता हलिउड अभिनेता फिलीप हाफमैनको आइतबार निधन भएको छ । न्युयोर्कको एक अपार्टमेन्ट मा ४६ बर्षीय यी अभिनेताको शव भेटिएको हो । उनको शवसंगै एक इन्जेक्सन र प्याकेट भेटीएकोले सो हेरोइन हुन सक्ने…
अहिलेसम्म सेक्स गरेको छैन, अफर आए सोच्नुपर्छ : नायिका सपना लामिछाने
सपना जी तपाईलाई स्वागत छ । थ्याङक यु भर्खरै जोसमा तपाईको सुटिङ सकाउनुभयो कस्तो लाग्यो ? के रोल हो तपाईको ? रमाइलो लाग्यो एज अ हिरोइन नै हो । फिल्म लाइन मा किन लाग्नुभयो ?…
कोलम्बियन पपस्टार साकिराले नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन्। अर्की पपगायिका रिहन्नासँग मिलेर उनले ‘कान्ट रिमेम्बर टु फर्गेट युु’ शीर्षक गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन्। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको उक्त भिडियो एक घन्टामै २० लाखले…